I-Xiaomi Mi MIX 2 entsha sele isemthethweni kwaye ifika ikulungele ukuma kuyo nayiphi na iflegi kwintengiso | Iindaba zeGajethi
Namhlanje ibingumhla uninzi lwethu beluphawule kwikhalenda okokoko uXiaomi wayebizele amajelo eendaba kumsitho, apho ophambili yayinguye Xiaomi Mi MIX 2.
Le Mi MIX 2 ayishiyanga wonke umntu nemilomo ivulekile, kuba sonke besisazi ukuba isikrini ngekhe sibe nemiphetho kwaye iinkcukacha ziya kuba zibalaseleyo, kodwa nayo yonke into ikwazile ukumangaliswa ziimpawu ezintsha ezibandakanyiweyo kwaye ngakumbi kuba uninzi loloyiko lokuba luyakukwazi ukumelana nayo nayiphi na iflegi ekhoyo ngoku kwintengiso kunye nezo zizayo.
1 Iimpawu kunye nokubalulwa kweXiaomi Mi MIX 2
2 Isikrini saphinda satsala umdla omkhulu
3 Ikhamera, ngaphandle kokuphindeka kabini, iya kuba nokuninzi okuthethayo
Iimpawu kunye nokubalulwa kweXiaomi Mi MIX 2
Apha sikubonisa ifayile ye- Iimpawu eziphambili kunye nokubalulwa kweXiaomi Mi MIX 2 entsha;
Imilinganiselo: 151.8 x 75.5 x 7.7 mm
Ubunzima: 185 gram
Iscreen: 5.99 intshi ngesisombululo sama-pixels angama-2.160 x 1.080
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 835
Imemori ye-RAM: 6GB
Ukugcinwa kwangaphakathi: 64/128/256 GB kunye nethuba lokwandiswa ngekhadi le-MicroSD
Ikhamera yangemva: i-megapixels ezili-12 ezine-sensor ye-IMX 386 kunye nesayizi ye-pixel eyi-1.25 µm
Ikhamera yangaphambili: i-5 megapixels
Ukunxibelelana: I-Bluetooth 5.0, izibuko le-infrared, izibuko lohlobo C lwe-C kunye nenzwa yeminwe
Inkqubo yokusebenza: I-Android 7.1 Nougat ene-MIUI 9
Ngaphandle kwamathandabuzo, kwaye ngenxa yezi mpawu kunye neenkcukacha, sinokuqonda ukuba sijamelene nesiphelo iya kuba yinxalenye ethe ngqo yentengiso ekuthiwa yeyokugqibela. Mhlawumbi ekuphela kwento engalunganga yale Xiaomi Mi MIX 2 yinkqubo yayo yokusebenza, kwaye oko kukuthi sifumana i-Android 7.1 Nougat, xa i-Android 8.0 Oreo entsha ifumaneka kwintengiso yeentsuku ezimbalwa, nangona mhlawumbi umenzi waseTshayina usenokuba ndicinge ukuba kungcono uhambe kancinci kwaye ungazibeki emngciphekweni kwinguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza kaGoogle, okwangoku kungekho nguqulelo ihlaziyiweyo ye-MIUI.
Kwividiyo esikubonisa apha ngezantsi unokubona indlela umboniso weXiaomi Mi MIX 2 kunye nezinye izixhobo athe uXiaomi wazisa ngokusemthethweni;
Isikrini saphinda satsala umdla omkhulu
Ngaphandle kwamathandabuzo, eyona nto ibalulekileyo ngeXiaomi Mi MIX yayisisikrini sayo esikhulu, kungabikho naziphi na izakhelo kwaye njengoko kungenakuba kule nguqulo yesibini yomenzi weTshayina, iscreen sibuye sitsaleleke kakhulu. Inkqubo ye- Isikrini se-intshi esingu-5.99 sinetekhnoloji ye-IPS kwaye sihlala phantse kuyo yonke ngaphambili, ukunciphisa isakhelo ngokubhekisele kwinguqulelo yokuqala kunye nokwenza ubungakanani obupheleleyo besixhobo bube buncinci kunangaphambili.
Ukongeza, ngoku iikona zine-curvature ebonakala ngakumbi eyinika umfanekiso ocekeceke kwaye ukhululekile, ikwanika imvakalelo yokuchasana okukhulu, umzekelo, ukuwa okanye ukubetha.
Ikhamera, ngaphandle kokuphindeka kabini, iya kuba nokuninzi okuthethayo
Enye yezona zinto zibalulekileyo malunga nale Xiaomi Mi MIX 2 intsha kukuba ikhamera yayo ayiphindi kabini, Ukulandela imeko yesininzi sezinto ezibizwa ngokuba ziitheminali eziphezulu ezifikelela kwintengiso. Lo ngumgaqo kukungalunganga okucacileyo, kodwa eyona khamera iphambili inomgangatho kangangokuba soyika ukuba kuya kuba nokuninzi okuthethayo.
Njengoko kuqinisekisiwe ngumenzi waseTshayina, ikhamera yangemva inyusa a I-386 megapixel ye-Sony IMX 12 isivamvo ngozinzo lwamehlo kunye nobungakanani be-pixel ye-1.25 µm. Yonke into iyabonisa, nangona okwangoku ingaqinisekiswanga ukuba ikhamera yale Mi MIX 2 iyafana nathi besele siyibona kwaye siyonwabela kwiXiaomi Mi6.
Nantsi imifanekiso eliqela ethathwe ngesi sixhobo epapashwe yiakhawunti esemthethweni yeXiaomi kwi-Twitter;
Okwangoku uXiaomi akaqinisekisanga umhla othile wokufika kwintengiso yale Mi MIX 2 intsha, kodwa amaxabiso azakufikelela ngawo kwintengiso yaseTshayina abhengeziwe;
Xiaomi Mi MIX 64 GB + 6 GBIiyuan ezingama-3299
Xiaomi Mi MIX 128 GB + 6 GBIiyuan ezingama-3599
Xiaomi Mi MIX 256 GB + 6 GBIiyuan ezingama-3999
Xiaomi Mi MIX 128 GB + 8 GB yodongweIiyuan ezingama-4699
Ucinga ntoni ngale Xiaomi Mi MIX 2 intsha kunye nexabiso eliza kukhutshwa ngalo kwiintsuku ezimbalwa kwintengiso yaseTshayina?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Xiaomi Mi MIX 2 entsha sele isemthethweni kwaye ifika ikulungele ukuma kuyo nayiphi na iflegi kwintengiso